Yenza Ikhishi Lakho Lihlakaniphe Ngompompi Basekhishini - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Yenza Ikhishi Lakho Lihlakaniphe Ngompompi Bekhishi
2021 / 09 / 24 UkwahlukanisaBlog 2428 0
Ompompi basekhishini batholakala ngosayizi abahlukahlukene futhi kubukeka kutholakala kalula, futhi ungawathenga kalula la mapompi ompofu kakhulu futhi asebenza kahle kunoma yisiphi isitolo sehadiwe noma ezempilo endaweni yakho yesitolo esiseduze. Kodwa-ke, kuvame ukunconywa ukuthi uthenge ompompi bamakhishi abanophawu ezinkampanini ezidumile okufanele zibe namandla amakhulu futhi zenze ulwazi oluhlala njalo olubalulekile kanye nompompi abanamandla basekhishini.
Amakhasimende angathola kalula amanzi ashisayo namakhaza ompompi be-Antique Brass angabasiza kakhulu. Lezi ompompi ziwusizo kakhulu futhi zisebenza kahle kungaba yimpendulo ephelele yokuhlanza lonke ikhishi lakho, ilondolo neminye imisebenzi. Lezi mpompi zekhishi, noma kunjalo, kufanele zisetshenziswe ngendlela efanelekile ukukhiqiza umkhiqizo wazo nokusebenza kahle ngendlela ekahle. Ompompi bangangena kahle kakhulu uma ungakwazi ukugcina noma ukunakekela kahle ompompi abangalimala noma bahluleke.
Ompompi ekhanyayo futhi acwebezelayo ekhishini empeleni bathambekele ekungezeni ekubukekeni kwekhishi lonke ngendlela engcono kakhulu. Lezi zihlala isikhathi eside kepha zinikeza isigaba esingeziwe nobuhle emaphepheni nasekucaciseni. Zenziwe ngezinto eziwusizo kakhulu neziphumelelayo ukuze zinikeze ukukhishwa okuphezulu nokuqina okukhulu kubasebenzisi.
Umpompi wasekhishini ophelile ungowekhwalithi ephezulu; ukuqedwa okuthuthukisiwe kulula ukuthatha izinhliziyo zokubona abathengi abangaba khona ngokushesha. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu empeleni senziwe ngensimbi engagqwali yokukhipha okuningi nokuqina okuthuthukile kokuthusi noma i-aluminium. Umpompi ompompi ophelele wethusi wenziwe ngokwenziwa ngokuxuba amandla obuciko bemfashini nobuntu, ngemuva kokukhishwa okuningi.
Inzuzo enkulu yezibuko zokugezela zethusi ukuthi ziyizinto ezingamelana namanzi futhi zivimbela ukugqwala okuyingozi. Kuyadingeka ukuphika noma yikuphi ukugqwala okungalimaza ompompi wakho ngokushesha. Ngakolunye uhlangothi, le mipompi yekhishi lethusi imbozwe ngenqubo entsha yokufaka enikezela ukukhiqizwa nokusebenza okuthuthukile kubasebenzisi. Ingasetshenziswa kalula ngaphandle kokucindezeleka nesikhathi esiningi.
Ngakolunye uhlangothi, umpompi wasekhishini awubeki noma yiluphi uhlobo lwengozi yezempilo futhi uzoba yindawo ekahle yokusebenza ongayisebenzisa ngaphandle kwenkinga. Umpompi unomklamo omuhle kakhulu wesimanjemanje oletha ukubukeka okusha nokuhlukile ekhishini lakho. Eqinisweni, ungaqiniseka ngempilo engcono ngaphandle kwesithiyo. Lezi ompompi zinganciphisa amazinga okucindezeleka ekhishini lakho.
Izinketho ezingenakubalwa zepayipi lokugeza
Abantu abaningi bangacabanga ukuthi ukuthola izesekeli ezihamba phambili zokugezela kubukeka kulula njengephayi. Kepha iqiniso liwukuthi, ikhanda lakho lizohamba uma kukhethwa umkhiqizo ofanele ekukhetheni okungapheli. Oompompi bezindlu zangasese sebekhona amashumi eminyaka futhi abasebenzisi ubuchwepheshe besimanje, kepha kuthatha ukuqonda okuncane ukukhetha ucezu oluhle. Akufanele ugxile ekwakhiweni nasekuhlelweni kokunye ngaphandle kokumiswa, uhlobo lwe-valve, ukuqeda kanye nesitayela. Kodwa-ke, zonke lezi yizici ezibalulekile okungafanele zinganakwa.
Ake sibheke ukuthi lezi zici zingasiza kanjani ukuthola ompompi ongcono kakhulu wendlu yakho yokugezela.
Lokhu kusho uhlobo olujwayelekile lwompompi noma ngabe luboshwe odongeni noma luyisandla esisodwa. Imigomo ehlobene kakhulu nokulungiselelwa imvamisa iphakathi kokuphakama nefomethi ebanzi. Lawa magama ahlobene nosayizi wepayipi nokuthi ingakanani indawo embozwe kusinki. Ngebanga lamasentimitha ama-4 phakathi kwezibambo, lolu hlobo lubizwa ngokuthi uhlobo olumaphakathi naphakathi futhi lufaneleka kangcono osinki abancane namakamelo okugeza. Ungakhetha phakathi kompompi ababili nababili abasetha ompompi. Oompompi abanzi banezibambo ezi-2 zamanzi ashisayo nabandayo, nezibambo ezibekwe ibanga elincane le-6 in. I-Zura ne-Dryden ukukhetha okuhle, ngakho-ke uma unendawo yokugezela enkulu, usinki noma isitopu, ungakhetha ngalokhu kulungiswa.
Akungabazeki ukuthi umpompi omuhle wekhwalithi uzohlala isikhathi eside. Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo kudlala indima ebalulekile lapha. I-Brass ivame ukusetshenziswa futhi intengo ilungile. Izinto ezishibhile kakhulu ipulasitiki, okungadumaza ngokwezinsizakalo. Uhlobo oluqonde kakhulu lwe-valve lisebenzisa ubuchwepheshe be-valve ye-compression, esebenzisa isici esifana nesikulufa ukwehlukanisa amanzi ashisayo nabandayo esibayeni. Njengoba kusebenza i-gasket yerabha, kungenzeka ukuthi izoguga ngokushesha futhi idinga ukugcinwa okuningi. Okompompi abane-single-lever kusetshenziswa ama-valve webhola. Bavumela amanzi abandayo futhi ashisayo angadlula esikhameleni ukuxubana. Kunezingxenye eziningi futhi awekho ama-washer. Ama-valve egobolondo asebenzisa izingxenye ezimbalwa futhi asebenzise umkhono ongenalutho. Zibuye ziguge ngokushesha okukhulu. Ama-valve e-ceramic disc asebenzisa amadiski ama-2 alawula ukuhamba kwamanzi futhi abe nezenzo phakathi kwawo angcono kakhulu uma kukhulunywa ngokuqina kwezinhlobo ezahlukahlukene zamaphayiphu ompompi bendawo yokugezela.
Uzokonakala ngokuzikhethela uma kukhulunywa ngezinhlobo zezindawo ezikhona emakethe yamapayipi okugeza. I-Nickel, i-chrome, ithusi, i-raber, i-bronze bronze, i-satin gold, ne-oyela ekhuhliwe nge-bronze ezinye zezinketho ezijwayelekile. Futhi unenqwaba yezinketho zombala ongakhetha kuzo. Okudingayo ukugxila kukho ukuphela komhlaba. Bheka ukuthunyelwa komhwamuko womzimba noma ukuqeda kwe-PVD. Isidingo sokuthola lesi sici ukuthi benza ompompi bakho babukeke busha futhi futhi bayamelana nokuklwebheka. Unezinketho eziningi zemibala lapha. Ungakhetha futhi ompompi abafakwe i-chrome, ikakhulukazi uma ufuna ithusi. Lokhu kuzomelana nokuguqulwa kombala nokugqwala. Kukhona okunye ukuqeda okwaziwa njengokuqedwa kwensimu, okufana nokugcotshwa ngesandla noma ithusi eligcotshwe uwoyela. Azimboziwe ngaphansi kwewaranti futhi azihlinzeki ngophawu oluvikelayo ompompi.
Idizayini esebenzayo yompompi iyisici esibonakalayo sepompo. Kunezinhlobo eziningi kuye ngesibambo osikhethayo. Isitayela se-gooseneck ngokuvamile sithandwa ngoba sinikeza ububanzi bemisebenzi ehlukahlukene. Ama-Sprinkers, izinketho ezingenazandla kanye nemiklamo enezinto ezincane zokuhambisa amanzi kwamapayipi nakho kuyathandwa. Oompompi abanezingalo ezikhulumayo nabo banendawo yokugezela ngoba kulula ukuyisebenzisa.
Uma kunokwenzeka, khetha kokubili usinki nompompi ukuqinisekisa ukuthi ziyahambisana. Ompompi nezihlambi Kunobubanzi obumangazayo nesitayela esinamathuba amakhulu okongiwa kwamanzi nokusebenziseka kalula komsebenzisi.
Edlule :: Ompompi Bendawo Yekhishi - Ukukhetha Omuhle Olandelayo: Amathiphu Wokugcina Oompompi Bakho Bokugeza Bengenabala futhi Bungavuza